Nkwado maka vidiyo vidiyo 960 fps bịarutere Realme 3 Pro | Gam akporosis
El Ezigbo 3 Pro ị na-enweta mmelite mbụ gị, nke na-eweta ihe ohuru na ngwa igwefoto. Ekwentị ahụ, nke izizi dị na Eprel 29, na-enweta ngwugwu ngwa ngwa ọhụụ mbụ site na OTA.
Versiondị firmware ọhụrụ ahụ n'onwe ya na-agbakwunye Nkwado maka obere vidiyo na ndekọ vidiyo na 960 okpokoro kwa abụọ.
Mmelite OTA na-eweta ọrụ 960fps ngwa ngwa na-arụ ọrụ na ekwentị, dị ka anyị kwuru. Mgbe ngwaọrụ ahụ malitere, Realme kpughere na atụmatụ ahụ ga-adị site na ya ma debe ya ugbu a. Enweghị ozi na ogologo vidiyo ndị enwere ike ịdekọ na ọnọdụ a.
Mmelite, nke nwere arọ nke 182 MB, na-emekwa ka nkwụsi ike igwefoto na nghọta doro anya na mma dị mma. Ndị ọzọ karịa mmelite igwefoto, enweghị atụmatụ ọhụrụ ndị ọzọ. Ọbụna ọ naghị emelite ihe nchekwa nchedo Eprel.
Cheta na Realme 3 Pro nwere ihuenyo Igirigi 6.3-inch nwere mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080 na pịnye Corning's Gorilla Glass 5. Ọ bụ site na nhazi Snapdragon 710.
Na azụ ya bụ 519 MP Sony IMX16 igwefoto nwere oghere f / 1.7, jikọtara ya na igwefoto nke abụọ MP maka mmetụta na-adịghị mma. Ngwa igwefoto nwere ọtụtụ atụmatụ, dịka ọnọdụ Nightscape, Ultra HD mode, Chroma Boost, Portrait mode, na ọkachamara ọkachamara. O nwekwara ike idekọ 4K na vidiyo oge na-enwe EIS. Ọkwa a na ihuenyo ahụ bụ ebe ihe mmetụta 25 MP nwere nkwado maka Unlock Face.
Ekwentị nwere batrị ikike 4045 mAh na VOOC 3.0 ụgwọ ngwa ngwa na-agba ọsọ ColorOS 6 dabere na A gam akporo 9 achịcha. Ọ dị na Lightning Purple, Nitro Blue, na Carbon Gray.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mmelite izizi nke Realme 3 Pro na-eweta nkwado maka obere vidiyo vidiyo na-adịghị nwayọ na 960 fps
Beta ọhụrụ maka OnePlus 5, 5T, 6 na 6T na - agbakwunye ịdọ aka na ntị na - ekpo oke ọkụ